MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA LHASAPOO IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha Lhasapoo iyo Sawirro
Lhasa Apso / Poodle Dogs breed Dogs
Reggie the Lhasa-Poo at 10 bilood jir— 'Markuu ahaa eey, waa inuu hayaa waqtiga oo dhan. Weli wuu jecel yahay in la qabto inkasta oo miisaankiisu ku dhow yahay 20 rodol. Wuu ku fiican yahay carruurta, aad buuna ii ilaaliyaa. Marka aniga iyo seygeyguba aan kor u qaadno codkeenna sabab kasta ha noqotee, wuxuu muujiyaa ciilkiisa isagoo ciyey oo istaagaya lugaha dambe. Waxaad moodaa inuu ogyahay markaan jiran ahay. Waxaan la ildaran yahay madax xanuunka dhanjafka wuxuuna sariirta dul jiifinayaa sariirtiis isagoo aad u deggan oo marwalba oo 'marar badan i hubiya' isagoo aad u jilicsan dhabankayga canugiisa ama sankiisa wejiga taabanaya. Isagu waa 'dhuumaaleysi' - wuxuu eegi doonaa hareeraha si uu u hubiyo in ninkaygu uusan eegin ka hor inta uusan ka helin wax sharrax ah geedka, wuxuu suulasha sariirta dul fariisan doonaa subaxa dambe isagoo rajeynaya in ninkayga uusan maqli doonin oo uu ku odhan doono 'soo deg! '' Wuxuu kaliya naga dhigayaa mid dhoola cadeeya markasta. '
adhijir Jarmal dabeecad isku darka hound
Lhasa-Poo ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Lhasa Apso iyo Poodle . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Lhasa-Poo
Diiwaanka Taranka Nakhshadeeye = Lhasa Poo
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Xannaanka Naadiga = Lhasa-Poo
Diiwaanka Canine-ka Caalamiga ah ee naqshadeeye®= Lhasapoo
'Holly, our 4-bilood jir ah Lhasapoo waxaa ka buuxa jacayl! Waxay jeceshahay ciyaar, waxay jeceshahay salaaxista, waxay jeceshahay inay wax cuno waxayna jeceshahay inay wax ka cunaan canqowgaaga !!! Shaqada guriga sifiican ayey usocotaa, sikastaba ha ahaatee waxay yeelataa shil marmar ah markaan fiiro gaar ah u yeelanin astaamaheeda. Aad ayey u caqli badan tahay markasta oo ay banaanka u baxdo si ay meheraddeeda u qabsato, waxayna ku soo noqotaa guriga, waxay ku oroddaa isla markiiba jikada waxayna fadhiisataa qaboojiyaha hortiisa, iyadoo fiirineysa. Weelka wax lagu daweeyo ayaan ku haynaa qaboojiyaha dushiisa. Mar hadday daaweynteeda hayso way socotaa! Holly waxay culeyskeedu yahay 8 bs lbs., Taas oo qiyaastii ah rodol iyo badh ka badan intii ay miisaantay markii aan gurigeeda keenay wax ka yar bil ka hor. '
Hees ka hor intaan la is qurxin
'Awit, eey eyga isku dhafan oo qiyaastii 1 sano jir ah, oo ah iskutallaabta Lhasa Apso iyo Poodle. Xaqiiqdii iyadu ma ahan jiil-jiilkii ugu horreeyay, maxaa yeelay aabbaheeda iyo aabbe hooyadeed durba waa Lhasa-Poos. Wax fikrad ah kama haysto ayeeyadeed iyo ayeeyadeed, sidaa darteed runtii ma dhihi karo jiilka ay ka tirsan tahay isku dhafka 'Lhasa Poo'.
'Awit waxay u egtahay Poodle badan, timaheeda jirkuna wax yar bay ku yaalliin dhinaca miskaha, qaab dhismeedka jirkeeda iyo dhererkiisuba sidoo kale waxay kudhow yihiin Poodle marka loo eego Lhasa Apso. Laakiin iyadu waxay leedahay timo toosan oo toosan, sida dabada iyo madaxeeda, taasi waa sababta aanan ugu siin karin taaj 'Poodle-look' habboon ama afro korkeeda madaxeeda. Waxaan u xiirnaa wejigeeda inkasta oo, sida Poodle jeexan oo aan u ilaalino timaheeda jirkeeda 'goosashada xagaaga,' inta badan iyada oo la adeegsanayo daab quruxsan # 7, maxaa yeelay timaheeda si dhakhso leh ayey u koraan. Koodhadhkeeda jilicsan ee cudbiska ah ayaa sidoo kale aad ugu nugul matoorka Awit ma daadiso laakiin waxay leedahay maqaar aad u xasaasi ah.
'Magaca Awit waa eray Filibiin ah oo macno ahaan macnihiisu yahay' heesid '(fal) ama' hees '(magac). Mida kale, ereyga 'awit' sidoo kale waxaa loo isticmaalay in lagu tarjumo erayga 'Sabuur' Baybalka.
'Awit waa eey aad u firfircoon. Waxay jecel yahay socodka iyo waqtiga ciyaarta. Waqtiga ciyaarta waxay ka dhigan tahay inay ordo oo ay ku dhiirato eeyahayaga kale inay ku eryanayaan guriga dhexdiisa. Waxay sidoo kale boodi kartaa (ogow: firfircoonideedu waxay u ekeysiineysaa inay runti duuli karto) sagxadda sariirta, sariirta, sariir ilaa sariir kale, iyo dib ugu noqoshada sagxadda iyadoo fudud.
'Awit sidoo kale waa mid saaxiibtinimo badan leh dadka kale iyo eeyaha kale oo u jilicsan carruurta - runtii, eey aad u la dhaqan badan, taas oo ka dhigaysa iyada mid aad uqurux badan oo noqota Rakeiste rasmiga ah ee K9 ee Dogbero, oo ah goobta lagu xanaaneeyo eeyada ee Filibiin. Haa, oo waxay heshaa hal 2 'lafo calalin ah maalin walba ama buskud eyg ah oo ay ku raaxeysan karto qalbigeeda farxad.
'Awit sidoo kale waa arday dhakhso wax u barta waana eey caqli badan. Waxaan isku dayay inaan sameeyo guji tababarka iyada korkeeda, oo waxay si fudud u soo qaadatay tilmaamaha 'fadhi' iyo 'hoos.'
Heesta kadib qurxinta
Maya eeyaha yar yar ee Lhasapoo ee jira 9 toddobaad iyo 2 rodol— Iyadu waa eey faraxsan oo xamaasad badan. '
'Bingo waa 6 jir Lhasapoo ah oo aan haystay tan iyo markuu ahaa eey. Wuu ku fiican yahay carruurta wuxuuna isku dayaa inuu la heesto carruurta xaafadda oo inta badan raba inay heesaan heesaha xanaanada ee 'Waxaa jiray Beeraley, Hadana Eey iyo Bingo ayaa Magaciisu ahaa ...,' oo wuxuu si toos ah madaxa kor ugu taagay hawada iyo qeylada heesta. Wuxuu doonayaa inuu ila joogo ilbidhiqsi kasta maalin kasta wuuna ila socdaa meel kasta oo ay macquul tahay in la qaato. Hadduu u maleeyo in looga tegayo wuxuu muujiyaa calaamado qeexan oo kala-tag ah. Wuu ilmeyn doonaa, ooyi doonaa xitaa wuxuu isku dayi doonaa inuu igu dul fariisto si uusan iiga tagin. Looma baahna in la sheego inuu jecel yahay inuu gaariga ku jiro isla markaana uu weheliyo wehel weyn. Isagu waa nin caqli badan oo fudud in la tababaro. 'Dog Whisperer,' wuxuu ahaa isha aan ka barto sida loo noqdo hogaamiye xirmeed wanaagsan Bingo waxay si fiican uga jawaabtaa farsamooyinka aan soo baranay yacni 'taabasho, hadal la'aan, indho la'aan.' Bingo wax weyn ayey kusoo kordhisay qoyskeenna waxayna siisaa jacayl badan intuu helo. '
Daisy the Lhasa-Poo da'da 4 sano
Daisy the Lhasa-Poo at 4 sano jir— 'Iyadu miyaanay AHAYN' ???
Princess Leia the Lhasapoo waa isku darka Lhasa Apso / Poodle. Waxay ku dhowdahay inay si buuxda u koreyso sawirradan, culeyskeeduna yahay qiyaastii 7 rodol (3.2 kg). Milkiilaheeda ayaa leh, 'Dabeecaddeedu waa mid aad u macaan oo iyadu waa qof caqli badan-way fadhiisan kartaa, hadli kartaa oo is gacan qaadi kartaa ka dib markaan haysto iyada oo kaliya 2 toddobaad. Iyadu sidoo kale waa ciyaartooy aad u firfircoon isla markaana aad u bood booda Badanaa waxay ka dhex booddaa guryo aad u fara badan qolka fadhiga alaabta guriga. Waa nooc ka mid ah ciyaarteeda inay dhulka taaban weydo. '
8-toddobaad jir madow Lhasa-Poo ah oo loo yaqaan Princess Leia
Angel 9-jirka Lhasa-Poo— Hooyadeed waa Lhasa Apso aabbeheedna waa Guntin Guntin. Waxay u egtahay hooyadeed, Lhasa Aspo. Mulkiilaheeda ayaa leh, 'Iyadu waa qof caqli badan, ciyaar badan isla markaana leh astaamo. Waxay la mid tahay ilmo yar waxayna jeceshahay dareenka aan siino. '
Eeg tusaalooyin badan oo ah Lhasapoo
Sawirada Lhasapoo 1
Poodle Mix Eyda Taranka
american bulldog 5 bilood jir
boston terrier beagle qas puppy
ceel iyo ingriiska bulldog mix
sida badan waa Cocker ah miisaantaan spaniel
pitbull iyo feer isku dhafka eeyaha
sawirada afka madow cur